Nezvedu - TOPTAC Co, Ltd.
Toptac co, iri muHongkong, China, mutengesi wepasi rese wezvivakwa zvekuvaka / zvekuvakisa, zvemukati zvekushongedza zvinhu. Ipa galvanized simbi strip, inopisa-dip galvanized simbi pombi, EMT pombi, welded simbi pombi uye simbi epurasitiki composite pombi, kuronga simbi, simbi simbi, akawanda zvigadzirwa akakodzera bhiriji, mugero, njanji chiteshi ,way, njanji. chitima uye chakakura-mana uye mashanu marudzi ekuvaka kuvaka, pamwe neakakwira-kusimuka rutsigiro system, nhanho yekuvaka hybrid mota, shanduri, simba / nyukireya chiteshi uye kutsigira chirongwa chekuvaka ngarava, chekufambisa uye dhipatimendi.
Uye spiral-simbi pombi dhayamita 219-3620mm, madziro ukobvu 4-30 mm uye JCOE pombi yesimbi inoshanda mune yakatwasuka yakapetwa-yakagadzika pasi akagadzika arc welding pombi, uye kududzirwa kwezvinhu zvakagadzirwa ndeye 400 - 1500 mm pakadzika. kureba, 8 mm-60 mm kweukobvu hwemadziro. mapaipi esimbi esimbi ane 30-800mm pahupamhi, 3-40 mm pamadziro kukobvu uye isina pombi dzesimbi mapaipi ane 325-1420mm pahupamhi, 8-40mm madziro. Zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya mukugadzira michina, kuvaka ngarava, mota, kukwira kwakakwira masisitimu, simbi yakakura simbi, simbi simbi dzimba, mine, rutsigiro rwesimbi, kutakurwa kwegesi, kutakurwa kwemvura, mafomu emafuta ekuchera migodhi, nezvimwe.
Kuda kwevatengi ndiko kukurudzira kwekuchinja kwedu kuenderera uye hunyanzvi
Zvigadzirwa zvinosangana nezvinodiwa zvemusika wepasi rose kuburikidza neyakaomeswa mhando yekuongorora
Yakavimbika Mushure meKutengesa Service
Mushure-yekutengesa basa ndiyo yekutanga yepamusoro mukutengeserana kwenyika dzepese, uye yakakwana-yekutengesa-basa ichapa vatengi vedu zvakanyanya kunaka kutenga.
Zvigadzirwa zvedu zvinoenderana ne: yenyika standard GB, maAmerican standard (API ASTM ASME), chiGerman standard DIN, chiJapan chinowoneka cheJIS, cheBritain chinowoneka BS chine zvakakwana uye zvinobudirira zvemhando yekutarisira uye mhando yekusimbisa mamiriro. isu tinoomerera pakuisa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro pekutanga. Iyo kambani ine michina yekumberi kwetekinoroji uye yakakwana yekutarisa matanho, Tine yepamusoro yekuongorora michina uye zviridzwa: X-ray yekuongorora michina, UT yekuongorora muchina, hydrostatic yekuongorora muchina, tensile bvunzo muchina, metallurgisation yekuongorora, test yemuviri uye yemakemikari ongororo lab uye yakazara kuongorora system. Zvese izvi zvekushandisa uye kuyedza uye kuongorora matanho anoona kuti kugadzirwa pamwe nekutarisa zvigadzirwa zvinogona kuzadzisa zvinodiwa zvido uye kugutsa zvido zvevatengi. Iko kushanda kwekambani kunotora kutenda kwakanaka senheyo seyenheyo, uye isu tinoratidza kuonga kwedu vatengi vatsva uye vekare nemhando yepamusoro, mutengo unonzwisisika, uye yakanakisa-yekutengesa basa. Isu tinoshuvira nemwoyo wose kugadza kushandira pamwe kwenguva refu nemi kuti mubatsirane uye musimbe pamwe!
Isu tinopawo simbi yekuisa simbi, maringe uye zvimwe zvigadzirwa zvemapaipi mune akasiyana zvigadzirwa, zvisiri-zvakajairwa zvigadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi uye zvinopesana nekuora-bata mukati meyekupedzisira nhanho yezvigadzirwa.